कर्णालीको खेलकुद विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? – Sajha Bisaunee
कर्णालीको खेलकुद विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
। २० फाल्गुन २०७४, आईतवार १६:२१ मा प्रकाशित
पछिल्लो समय खेलकुद क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै गएको छ । खेल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र लगाव पनि बढ्दै गएको देखिन्छ भने नेपाली खेल जगत् पनि व्यावसायिक बन्दै गएको अनुभव हुन थालेको छ । राज्यबाट अपेक्षाकृत रूपमा लगानी हुन नसकेपछि राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा खेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति, खेलाडी र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा खेल गतविधि भने भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि समय–समयमा विभिन्न खेल गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । यसैक्रममा शनिवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनमा आएको छ । पहाडी र हिमाली भूगोलले ओगटेको यो प्रदेशमा क्रिकेटप्रति खेलाडीहरूले देखाएको लगाव प्रशंसनीय छ । सीमित साधन, स्रोत र लगानीका बाबजुद पनि खेलाडीहरूले क्रिकेटमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले खेलाडी र खेलसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूलाई कर्णाली प्रदेशको खेलकुदको विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? भनेर सोधको थियौं । प्रस्तुत छ, उनीहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तैः
खेल क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो कुरा त संघ बलियो हुनुपर्छ । हाल सर्खेतमा खेलकुदका लागि आवश्यक भौतिक संरचना छैन । खेल मैदान यहाँका लागि चुनौती बनेको छ । सुविधायुक्त खेल मैदान हुनुपर्ने हो तर, छैन । खेल्ने सामग्रीहरूको पनि पर्याप्तता छैन । जसले गर्दा खेलाडीको विकास हुनसकेको छैन् । खेलाडीहरूलाई हौसला बढाउने खेलहरू हुनुपर्छ । वर्षमा एक पटक मात्रै हुने खेलले वास्तवमा खेलाडीले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा सुर्खेत मात्रै होइन कर्णाली प्रदेशले नै खेलक्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि सरकारले नै उचित कदम चाल्नुपर्छ ।
खेलकुद क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरू सुर्खेतमा छन् । खेलाडीहरू संगठित भएका छन् । तर, उनीहरूका लागि अवसर दिने गरी त्यति धेरै प्रतियोगिताहरू हुन सकेका छैनन । जसले गर्दा खेलाडीको मनोबल घट्दै गएको छ । खेलकुदका विभिन्न प्रतियोगिताहरू हुनुपर्छ । प्रदेशभर खेलाडीहरू संगठित हुनुपर्छ । प्रदेशतहमा खेलकुदका लागि आवश्यक पर्ने फिल्ड छैन । जसले गर्दा खेल क्षेत्रको चाहेर पनि विकास हुनसकेको छैन । जति खेलहरू भए त्यति धेरै खेलाडी उत्पादन हुने हुन् । जसले गर्दा खेलाडीहरू कमै मात्रामा उत्पादन हुने गरेका छन् । अबका दिनमा खेलकुदको विकास गर्ने हो भने स्थानीय तह, विद्यालय, वडास्तरमा विभिन्न प्रतियोगिता आवश्यक छ ।
सुर्खेत जिल्लामा देउती क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएको छु । यो प्रदेशमा खेलकुदका अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यहाँका खेलाडीले अवसरलाई पर्खेर बसेका छन् । प्रदेशमा गरिदिने एउटा मात्रै सुरुवात भनेको क्रिकेट मैदान बनाइदिने हो । स्थायी क्रिकेट मैदान अभाव नै प्रमुख समस्या हो । अर्काे कुरा हामी आफ्नै पकेटबाट पैसा हालेर खेलकुद प्रतियोगिताहरू सहभागी हुन्छौं, खेल आयोजना गर्छाै । सरकारी तहबाट खासै काम भएको छैन । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ यो अवसरमा प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रलाई पहिाले प्राथमिकतामा राखेर खेलकुद मैदान बनाइदिन आग्रह गर्छु ।
हाल सुर्खेत जिल्लामा भइहेको टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन रुकमबाट आएको छु । संघीय संरचना अनुसार पहिलो पटक हुन लागेको यो प्रतियोगितामा विभिन्न कठिनाइका बीचमा भाग लिन पाएका छौं । हाल देश संघीयतामा गएको छ । स्थानीय तहमा पनि शक्तिशाली सरकारका रूपमा अधिकार पाएको छ । त्यसले गर्दा अबको खेल क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहले प्रतियोगिताहरू गर्ने, भौतिक संरचना बनाउने, खेलाडीहरूको आत्मबल बढ्ने खालका क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । पहाडी क्षेत्रमा क्रिकेटका बारेमा थाहा नै छैन । खेलाडीलाई प्रोत्साहन दिन स्थानीय तहबाटै सहयोग हुन आवश्यक छ ।
खेलकुद क्षेत्रको विकास लागि राज्यले सर्वप्रथम त क्रिकेटका लागि पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ । देशको छवी माथि उठाउने खेलका रूपमा क्रिकेट गनिएको छ । अन्य खेलको तुलनामा यो खेलले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा चिनाउने भूमिका रहेको छ । देश संघीय संरचनामा गएको छ । त्यसले गर्दा पनि खेलकुदका लागि राज्यले पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याएर पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधन जुटाउँदा मात्रै खेलकुद क्षेत्रको विकास हुन्छ । अहिले दुरदराजमा क्रिकेटका बारेमा कोही पनि जानकार छैनन् । यसर्थ क्रिकेटका बारेमा कमै जानकार छन् । नगर र गाउँपालिकाबाट पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
दिपक बाठा मगर
वास्तवमा खेल क्षेत्र भनेको निकै कठिनाइको विषय छ । हामीले खेल्दै जाँदा निकै चुनौतीहरू छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा निकै चुनौती बनेको छ । राज्यले क्रिकेटप्रति त्यति धेरै ध्यान दिन सकेको छैन । जसले गर्दा आज पनि खेलकुदप्रतिको मोह भए पनि खुम्चिनुपर्ने अवस्था छ । विकास हुनसकेको छैन । अब नयाँ संरचनामा देश अगाडि बढेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघमा सरकार गठन भइसकेको छ । विगतमा केन्द्रको मुख ताक्दा विकास नभएको कर्णाली क्षेत्रको समग्र विकाससँगै खेलको विकासतर्फ राज्यको ध्यान जानेछ । पर्याप्त मात्रामा प्रशिक्षक नहुनु पनि चुनौतीको रूप बनेको छ । राज्यले विशेष गरी नेपाल चिनाउने पहिचान खेल क्षेत्रको विकासतर्फ ध्यान देआस् ।
कर्णाली प्रदेश आज सबैभन्दा गरीब प्रदेशका रूपमा चिनिएको छ । विकास र समृद्धिका लागि यो प्रदेशमा जति प्रतिक्षा यस क्षेत्रका जनताले गरेका छन्, त्यति खेल क्षेत्रले पनि गरेको छ । प्रदेश विकासमा जलविद्युत, पयर्टन, कृषिसँगै खेलकुद पनि एक आधार हो । जसका लागि प्रदेश सरकारले मात्रै होइन संंघले समेत पहिलो प्राथमिकतामा खेलकुद क्षेत्रलाई राखिनुपर्छ । खेलकुद मैदान निर्माण हुनसकेको छैन । अब प्रदेशस्तरकै खेल मैदान बनाइनुपर्छ । खेलाडीका लागि सम्बन्धित खेलमा पोख्त प्रशिक्षकहरू छैनन् । जसले गर्दा खेल क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन ।
खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यबाट सहयोग मिलेको छैन । खेल्ने इच्छा भएका खेलाडीहरूले पनि पर्याप्त अवसर पाउनसकेका छैनन् । कुनै पनि प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा व्यक्तिगत रूपमा पैसा हालेर खेलमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ । ग्रामीणबस्तीमा खेल खेल्नुपर्छ भन्ने प्रभाव पर्न सकेको छैन । अब सरकारले स्थानीयस्तरमा रहेका सबै विद्यालयमा खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न प्रतियोगिताहरू गर्नुपर्छ । नत्र खेलाडी उत्पादन मात्रै होइन खेल क्षेत्रको विकास समेत सम्भव छैन । अर्कोतर्फ लगानी बढाउनुपर्छ । जसले गर्दा खेलाडीहरूलाई खेल क्षेत्रमा लागेको अपनत्व होस् ।
बेला बखतमा हुने प्रतियोगिता नै खेलाडीहरूले चित्त बुझाउने बाटो बनेका छन् । खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कुनै प्रकारको प्रशिक्षण प्रभावकारी छैन । जसले गर्दा खेल क्षेत्रको विकास नभएको हो । साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले पनि खेल मैदानको अभाव झेल्यो । हाल देश संघीयतामा गएको छ । सिंहदरबारको अधिकार ल्याएर स्थानीय तह र प्रदेशतहमा सरकार आएको छ । जसले गर्दा खेलप्रेमीहरूले पनि खेल क्षेत्रको विकास भएको हेर्न पाउने आशा गरेका छन् । अब गाउँको सिंहदरबारले राष्ट्रको पहिचान उत्पादन गर्न खेल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँमा खेलमैदान अनिवार्य बनाउनसके मात्रै खेलकुद र खेलाडीको विकास हुन्छ ।